प्रधानमन्त्रीलाई जे बोल्नपनि छुट !! - Mitho Khabar
प्रधानमन्त्रीलाई जे बोल्नपनि छुट !!
June 20, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on प्रधानमन्त्रीलाई जे बोल्नपनि छुट !!
काठमाडौंः मुलुकको कार्यकारी प्रमुख देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। कार्यकारी प्रमुखले जनताको आशा र अपेक्षा सम्बोधन गर्नुका साथै व्यक्त गर्ने धारणा पनि तथ्य, तथ्यांकमा आधारित र जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ।
त्यसमा पनि संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख ९प्रधानमन्त्री० जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीय संसद्मा राखेका धारणा गैरजिम्मेवार छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा सुन्दा उनले ले जे बोले पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ।
देश, जनता र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री आफूखुसी जे मनलाग्यो त्यही बोलिरहेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री अन्टसन्ट बोल्नुभन्दा समस्या समाधानतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। ’ प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा उहाँले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने र मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी लिनुभन्दा आफूखुसी अन्टसन्ट धारणा राख्दै आउनुभएको छ। ’
मन्त्रीहरुले राख्ने धारणा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भुसालले प्रधानमन्त्रीले राख्ने धारणा त अझ धेरै जिम्मेवारपूण हुनुपर्ने बताइन्। ‘उहाँ ९प्रधानमन्त्री० जिम्मेवार देखिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राखेका धारणा सुन्दा लाग्छ उहाँमा म नै अलइन अल हो भन्ने बुझिन्छ। उहाँले भनेकै मात्र सत्य हो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि हुन्छ जस्तो देखियो। जुन ठिक होइन। मुलुकमा सबैभन्दा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। ’ सरकारी अधिकारीले कोरोना भाइरस बारे विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य आधिकारिक निकायको सूचनामात्र विश्वसनीय हुने बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसबारे बोलेका कुराले जनतालाई भ्रमित बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जबाफ दिने क्रममा नेपालीमा कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बलियो छ भन्ने दाबी गरे। तर उनको यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार देखिएको छैन। कोरोना संक्रमित दैनिक ५ सयभन्दा बढीका दरले बढ्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बेसारले औषधिको काम गर्ने भनेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा भने बेसारले विषको काम गर्ने बताए। कोरोना भाइसरबाट अहिलेसम्म २२ जनाको मृत्यु भएको सरकारले नै घोषणा गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले कोरोनाका कारण तीनजनाको मात्र मृत्यु भएको बताएका छन्।
त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले चीनको वुहानबाट आएको कोरोना भाइरसभन्दा भारतबाट आएको कोरोना भाइरस अलि कडा रहेको बताए। नागरिक दैनिकबाट
एकै दिन १३ सय ५२ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, थप ३० हजारमा संक्रमण